Nchedo Onye na -ere ahịa -
Etu ị ga -esi pụọ na radar nkwusioru na -emefughị ​​puku kwuru puku dọla na ịrịọ arịrịọ nkwụsị.
Ndị na -ere ahịa niile maara na iwu Amazon na -agbasi ike kwa ụbọchị ọkachasị mgbe ndị na -ere ahịa na -eme DropShipping. Nchedo A+ na -ere ahịa ga -ebelata ohere ị nwere ịkwụsị ọrụ ma nye gị ihu site na ime ihe ngwa ngwa n'okwu metụtara ahụike akaụntụ.
Gịnị kpatara nchekwa A+ Onye na -ere ahịa ji dị mkpa?
Onye ọ bụla maara na nkwusioru Amazon bụ ezigbo ego. 3 n'ime akaụntụ 10 anaghị arụ ọrụ ọbụlagodi mgbe ha nyechara ọtụtụ akwụkwọ mkpesa. Ọ bụrụ na kwụsịtụrụ Akaụntụ, ị na -emefu $ 1k -$ 2k na nkwụsị ọ bụla, ma, enweghị -ekwe nkwa na ị ga -arụ ọrụ. Nchedo ndị na -ere ahịa A+ ga -azọpụta oge na ego gị, ọ ga -ebelatakwa ohere nke ịkwụsịtụ gị ruo 80% nke onye ọ bụla na -ere ahịa na -achọ. Nchedo A+ na -ere ahịa na -arụ ọrụ dị ka ndụ maka ndị niile na -ere Amazon.
Ohere nkwusioru belatara site na 80%
A ga -eme ngwa ngwa mebie iwu niile nke ga -ebelata ohere nke nkwusioru ahụ na -akpaghị aka
Ahụike Akaụntụ na Ọmarịcha Ọnọdụ
Ruo n'ókè ịrụ ọrụ mbupu na arụmọrụ ndị ahịa ga -eme ka ahụike akaụntụ dị mma
Mkpuchi maka nkwụsịtụ ọdịnihu
Ọ bụrụ na ị kwụsịtụrụ ọbụlagodi mgbe i mechara nsogbu niile ozugbo. A ga -ekpuchi gị maka nkwusioru n'ọdịnihu.
Malite na Anyị
Ihe na -erughị 2 Mmebi iwu ma ọ bụ nkwupụta AZ na akaụntụ ahụ.
Nhichapu Ahụike Akaụntụ
Mkpuchi maka Nkwusioru Ọdịnihu
Adịla na -atụfu ohere iji nweta
NKWUKWU 5% -10% MGBE
Ngwa ngwa- Onyinye Nkwado a ga-agwụ na:
Ị nwere ajụjụ gbasara atụmatụ a? Hụ ndepụta dị n'okpuru maka ajụjụ anyị na -ajụkarị. Ọ bụrụ na edepụtaghị ajụjụ gị ebe a, biko kpọtụrụ anyị.
Enwere m ike ịdebanye aha? Ọ bụrụ na m nwere ihe karịrị mmebi iwu 2 na akaụntụ ahụ?
Ee, ị ga -akwụrịrị ụgwọ ego maka ọnwa anọ mbụ.
Ọ bụrụ na akwụsịrị m mgbe m debanyere aha atụmatụ a, m ga -akwụ ụgwọ ọ bụla?
Gịnị ma ọ bụrụ na akwụsịrị m n'otu ọnwa ahụ ka m debanyere aha a?
Ịkwesịrị ịdebanye aha gị opekata mpe ọnwa 6 iji kpuchie mkpuchi. Ọ bụrụ na ị kwụsịtụrụ tupu ọnwa atọ, ị ga -akwụ naanị 6/1 nke ngwugwu akwụkwọ ozi arịrịọ anyị.